Yangu iPhone bhatani repamba harisi kushanda! Heino mhinduro yekupedzisira. - Zvimwe
zvinorevei kurota satani
maitiro ekuchinja otomatiki pane iphone 6
iphone 6 inopisa uye inodonha bhatiri
Yangu iPhone bhatani repamba harisi kushanda! Heino mhinduro yekupedzisira.
Zviri nyore kukanganwa kuti kangani isu patinoshandisa Kumba bhatani pane edu maPhones, kusvikira yamira kushanda. Pamwe bhatani rako reKumba harife rakashanda, kana pamwe rinongoshanda vamwe nguva. Chero nzira, zvinoshungurudza, asi nhau dzakanaka: Matambudziko mazhinji eKumba anokwanisa kugadziriswa kumba. Mune ino chinyorwa, ini ndichakubatsira iwe kuziva nei yako bhatani repamba reImba isiri kushanda , mashandisiro aungaita AssistiveTouch semhinduro yechinguvana uye vamwe zvakanaka kugadzirisa sarudzo kugadzirisa bhatani repamba rakatyoka kana iwe usingakwanise kuzvigadzirisa pachako.
IPhone yangu inoda kugadziridzwa here?
Kwete hazvo. Software matambudziko Y Hardware inogona kukonzera kuti mabhatani epamba amire kushanda. Zvinetso zveSoftware zvinowanzo gadziriswa kumba, asi kana tikaona kuti bhatani rako reKusha harisi kushanda nekuda kwedambudziko rehardware, ini ndinokurudzira dzimwe nzira dzakakura dzekugadzirisa kuti iwe uongorore.
iphone 7 bhatiri isiri kuchaja
Chekutanga zvinhu kutanga: ngatiitei shuwa iwe uchikwanisa shandisa yako iPhone usati waenda kune mhinduro.
Ndingashandise sei yangu iPhone pasina bhatani repamba?
Kana bhatani repamba risingashande, dambudziko hombe rinosangana nevanhu nderekuti havagone kusiya maapplication avo vodzokera kuscreen chekumba . Chaizvoizvo, ivo vanonamira mukati memapurogiramu ako. Neraki, pane basa mu marongero kudana RubatsiroTouch iyo inokutendera iwe kuwedzera bhatani repamba rakapotsa kune yako iPhone skrini.
Kana iwe uri kuverenga ichi chinyorwa uye ikozvino iwe wakanamatira pane app, bvisa yako iPhone kudzima uye pamusoro zvakare. Mhinduro yakaoma, asi ndiyo yega.
Maitiro ekuratidza bhatani repamba pane yako iPhone skrini
Enda ku Zvirongwa> Kupinda> Kubata wobva wadzvanya RubatsiroTouch uye tinya switch iripedyo neAccendiveTouch kuti iigone. Kuti ushandise bhatani repamba, tinya bhatani Rubatsiro Bata Bhatani assistive touch screen, wobva wabata Kutanga . Unogona kushandisa munwe wako kufambisa bhatani reAssiveiveTouch chero pahwindo.
AssistiveTouch haisi mhinduro chaiyo, asi zviri yakanaka workaround apo isu tichaona nei yako Kumba bhatani isiri kushanda. Kana iwe uchida rubatsiro kuibatidza, tarisa yangu YouTube vhidhiyo pa mashandisiro aungaita AssistiveTouch .
Iwo maviri mapoka ematambudziko ebhatani repamba
Matambudziko eSoftware anoitika kana yako iPhone ikasapindura nenzira kwayo kana iwe ukadzvanya bhatani repamba. Iyo Hardware inogona kunge iri kutumira iyo chiratidzo, asi kana iyo software isiri kuteerera, hapana chinoitika. Kana yako iPhone software ikaora, kuwandisa, kana chirongwa chekubatsira (chinonzi maitiro) kupaza kumashure kweiyo iPhone yako, bhatani rako reKumba rinogona kumira kushanda.
Matambudziko emahara nemabhatani eImba anowanzo kuwira mune chimwe chezvikamu zvitatu:
Kazhinji kupfeka (uye tsvina)
Mune zvimwe zviitiko, uye kunyanya kana maPhones achishandiswa munzvimbo dzine guruva kana dzakasviba, bhatani reKumba rinogona kushomeka kubata. Usafunge kuti izvi ndizvo zviri kuitika kana bhatani rako reKumba richiita nguva nenguva (dzimwe nguva), matambudziko esoftware anokonzeresa izvi futi. Mune ruzivo rwangu, nyaya yekupfeka inokanganisa pre-Kubata ID iPhones (iPhone 5 uye yapfuura) kupfuura emhando dzazvino.
Bhatani repamba rakadzingwa mumuviri
Kutyoka! Bhatani rako reKumba hakusi kwaraimbove, kana kuti zvishoma 'kunze kwenzvimbo', izvi hazviwanzoitika.
kuwana mari muhope kunorevei
Imwe yetambo dzinobatanidza bhatani repamba kubhobhobhoyo haina kunaka
Bhatani repamba rakabatana panyama nechiratidziro che iPhone yako, uye tambo mbiri dzinotakura chiratidzo kubva kubhatani repamba kuenda kubhodhi reamai kana bhodhi reamai. Imwe tambo inomhanya kuburikidza nepamusoro pechiratidziro uye inosangana kumusoro kwebhokisi remafungiro, uye imwe tambo inosangana kune iro raamai bhodhi pasi pebhatani reImba kuruboshwe. Kana yako iPhone skrini yakakuvara kana yako iPhone yatota, imwe yemabhatani epamba tambo kana zvinongedzo zvinogona kunge zvakakuvara zvakare.
Maitiro ekugadzirisa iyo iPhone pamba bhatani isiri kushanda
Vashandi veApple Chitoro vanoona maPhones ane mabhatani epamba akaputsika nguva dzese. Ini ndaizogara ndichitarisa kukuvara kutanga, ndogadzirisa iro software dambudziko, ndobva ndagadzira iyo Hardware kana zvichidikanwa.
Mutemo wakajairika Kana bhatani rako reKumba rikamira kushanda mushure mekunge yako iPhone ikanganisika mumuviri kana kunyorova, yako iPhone ingangoda kugadziriswa, asi kwete nguva dzose. Kana zvikawedzera zvishoma nezvishoma nekufamba kwenguva kana pakanga pasina chiitiko chikuru muhupenyu hweiyo iPhone isati yamira kushanda, tinogona kuzogadzirisa kumba.
1. Edza bhatani rekutanga rako pachako
Dzvanya bhatani rekutanga nemunwe wako. Iwe unonzwa wakasununguka here kana iwe unonzwa kunamira? Zvinyoronyoro fambisa chigunwe chako kubva kudivi kuenda kudivi - bhatani repamba rinonzwa rakasununguka? Kana ikasanzwika sekuda kwayo, tingave tiri kubata nedambudziko rehardware, asi kana yakagara ichinzwa 'zvishoma zvishoma' uye ichangomira kushanda, inogona kunge iri dambudziko repasoftware.
Yeyakanyanya kukosha panyama bhatani bvunzo
Pandaive ndichishanda muApple Chitoro, kazhinji vanhu vaiuya votaura kuti bhatani ravo reKumba raingoshanda chikamu chenguva, asi takaona izvozvo bhatani rekutanga rakashanda zvachose mune dzimwe nzvimbo, uye kwete mune vamwe . Imwe nzira yatinogona kuona kuti iri dambudziko rehardware zviri uchishandisa bvunzo inotevera:
Dzvanya bhatani rekutanga kumusoro. Zvinoshanda? Edza kuruboshwe, uye pasi, uye ipapo kurudyi. Edzai makona. Kana ichingo shanda mune dzimwe nzvimbo, senge yepamusoro asi kwete yepasi, zvirokwazvo une dambudziko rehardware . Iwe haugone kugadzirisa bhatani reKumba rine dambudziko 'rinotungamira' rakadai pamba, asi vazhinji vevanhu vandakashanda navo vangangosarudza kungogara nedambudziko izvozvi zvavaiziva kupi tinya bhatani Rokutanga.
sei kubatanidza yangu iphone kune purinda
2. Ongorora yako iPhone kuti kukuvara
Nyatso tarisa bhatani reKumba, yako iPhone skrini, uye mukati mechaji yekuchaja uye headphone jack pazasi peiyo iPhone yako. Pane chero kukuvara kwemuviri kana ngura? IPhone yako ingadai yakanyorova here? Zvimwe zvimwe zvinhu (sekamera) zvakamirawo kushanda, kana ndizvo chete iro bhatani repamba iro rine dambudziko?
Kana iwe ukaona kukuvara kwemuviri kana kwemvura, zvinotova chokwadi kuti bhatani rako reKusha harisi kushanda nekuda kwedambudziko rehardware, uye yako iPhone ingangoda kugadziriswa, enda kuchikamu chinonzi Kugadzirisa bhatani repamba rakatyoka ipapo.
iphone 6 skrini yakasviba asi foni yakavhurika
3. Dzima yako iPhone bvisa uye on zvakare uye bvunzo
Isu tinotendeukira kune iyo software yekugadzirisa chikamu chedzidziso. Sezvatinokurukura, Bhatani rako reKumba rinogona kusashanda kana yako iPhone software ikasaita nenzira yainofanirwa kana iwe uchidhinda bhatani reKumba. Kana yako iPhone yanga ichinonoka munguva pfupi yapfuura, maapplication abondera, kana bhatani rako reKumba rakamira kushanda mushure mekuvandudza kune imwe vhezheni yeIOS, software inogona kunge iri iyo chikonzero nei bhatani rako reKusha risingashande.
Yekutanga (uye isinganetsi inesimba) software yekugadzirisa danho kudzima yako iPhone kudzima zvekare. Kana iwe watotangidzirazve yako iPhone kuvhura AssistiveTouch uye izvo zvisina kugadzirisa yako Yemukati bhatani nyaya, ramba uchiverenga.
Paunodzima yako iPhone, zvese zvidiki zvirongwa zvinoita kuti zvirambe zvichimhanya, imwe yacho inoita 'zviitiko' sekudzvanya bhatani reKumba, zvinomanikidzwa kuvhara. Paunodzosera yako iPhone kumashure, iwo mapurogiramu anotangazve, uye dzimwe nguva izvo zvakakwana kugadzirisa diki software dambudziko.
4. negadziriro yeparutivi nokudzosa iPhone wako, uye edza zvakare
Zvinonyanya kukosha software zvinogona kugadziriswa chete nekudzosera yako iPhone, zvinoreva kuti ichabvisa uye kurodha pasi rese software pane yako iPhone. Kana iwe ukaita musangano neApple technical rutsigiro kugadzirisa bhatani reKumba uye pachena Haisi dambudziko rehardware, nyanzvi ichagara ichidzorera yako iPhone kuti ive nechokwadi chekuti harisi dambudziko re software usati waita kugadzirisa.
Dzorera yako iPhone ku iTunes kana iCloud, uye wobva wateedzera iyi mirairo kuti uite DFU kudzorera kune yako iPhone. DFU inomirira 'Chishandiso Firmware Dzokorora,' uye firmware ndiyo chirongwa chinodzora mashandisiro anoita hardware yako iPhone nesoftware. Iyo firmware iri pakati pe Hardware uye iyo software Unoiwana here?
maitiro ekugadzirisa yako memoji
Iwe haugone kuwana rairo yekuti ungaite sei DFU kudzorera kune yako iPhone pane Apple webhusaiti. Iyo ndiyo yakadzika mhando yekudzoreredza inogoneka, kana iyo DFU kudzoreredza unokwanisa gadzirisa dambudziko re software, ichagadzirisa . Chinyorwa changu chinotsanangura maitiro ekuita DFU kudzorera kune yako iPhone . Verenga icho chinyorwa uye dzoka kuno kana wapedza.
Kana kudzoreredza kwapera, iwe uchave unokwanisa kurodha rako rezve ruzivo kubva kune yako iTunes kana iCloud backup, uye iyo Bhatani bhatani nyaya inofanirwa kugadziriswa zvakanaka.
Inenge hafu yevanhu vandinoshanda navo vangasarudza kugara neAssiveiveTouch, iro 'software' bhatani repamba rinowanikwa pane iyo iPhone skrini. Haisi mhinduro yakakwana, asi imhinduro mahara . Kana iwe uri kutenga chirongwa chitsva cherunhare kana uchida kukwidziridzwa, ichi chingave chiri chikonzero iwe chawanga wakamirira kuti utore iPhone nyowani.
Start bhatani: kushanda senguva dzose
Bhatani repamba risingashande nderimwe rematambudziko anoshungurudza varidzi ve iPhone vangatarisana naro. AssistiveTouch iguru stopgap, asi zvirokwazvo haisi mhinduro yakakwana. Ndinovimba wakakwanisa kugadzirisa bhatani rako reKumba kumba, asi kana usati, ndinoda kuziva kuti ndeipi gadziriso yawakasarudza muchikamu chekutaura pazasi.